ရွှေနိုင်ငံ: လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းသူ ထောင်ချခံရ
လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းသူ ထောင်ချခံရ
မန္တလေးတိုင်း အမရပူရမြို့က တမာအရိပ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မတင်မာရီ (ခေါ်) မနီ ကို တရား မဝင် စီတန်း လှည့်လည်မှုပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် တရားရုံးက မနေ့က ထောင်ဒဏ် ၁ လ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသမှာ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတရုတ်လူမျိုးနှစ်ယောက်ကို ပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့ စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်ကကျောင်းသူ မဖြူနှင်းထွေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင် ဘာ လမှာ မတင်မာရီတို့က မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားမှာဝတ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ကြတာကို ချမ်းမြ သာစည်မြို့ နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားစွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ မတင်မာရီကို အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပြီး အိုးဘိုထောင်ကိုပို့ လိုက်တယ်လို့စာရေး ဆရာ မင်းထက်ငြိမ်းချမ်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။
"မဟာမုနိဘုရား ရင်ပြင်ထဲမှာ မန္တလေးမြို့က တက်ကြွသူ ၇၀ ကျော်လောက် စုရုံးပြီးတော့မှ ဗကသ ကျောင်းသူ ဖြူနှင်းထွေးကို ဦးပိုင်၊ ဝမ်ပေါင်ကနေ တရုတ် အမျိုးသား ၂ ယောက်ကို ပြန်ပေးဆွဲပါ တယ် ဆိုပြီးမှ စွပ်စွဲပြီးတော့ ရုံးထုတ်စစ်ဆေး နေတဲ့ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် ပါစေလို့ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်၊ သို့သော်လဲပဲ ဥပဒေအရဆိုရင် ပါဝင်တဲ့သူ အားလုံးကို အရေးယူရမှာ ဖြစ်ပေ မယ့် သူ့တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ အရေးယူလိုက် တာဖြစ်တယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဒဏ်ငွေကို လုံးဝမပြောပဲ နဲ့ ထောင်ဒဏ်ခဏကျခံစေ ဆိုပြီးလုပ် လိုက်တယ်၊ ဆိုလိုတာက ဒဏ်ငွေ မဆောင်နိုင်လို့ ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့၊ ဒါကို သက်ညှာမှုမရှိဘူးဆိုတာသိပါတယ်၊ အထက်အမိန့်တစ်ခုထဲနဲ့ ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အားလုံးခံစား ကြည့်လို့ရတယ်၊ ညနေ ၄ နာရီခွဲမှာ အိုးဘိုထောင်ကိုတစ်ခါတည်း ခေါ်ဆောင် သွားတယ်"
မတင်မာရီဟာ ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံကတည်းက ဒီမိုကရေစီရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ သူဖြစ်သလို၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကမှားယွင်းထောင်ချတာခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသူဟောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ကလွတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သလို၊ တမာအရိပ် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကိုလဲ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေသူဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 12:22
ညောင်ရမ်း မင်းသား၏ နောက်ဆုံး နေ့ရက်များနှင့် အခြားစာတမ်းများ
ယခုသီတင်းပတ်တွင်တော့ သမိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို မိတ်ဆက် ဖော်ပြလိုပါသည်။ ထိုစာအုပ်ကား သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာကျော်ဝင်း (ငြိမ်း) ရေးသ...
ဧရာဝတီဘဏ်မှ ငွေကျပ် သိန်း ၂၅၀၀ ကို လက်မှတ်အတုဖြင့်...
လေပွေလှိုင်းများကြောင့် အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာနိုင်...
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ကျားဖြူ)စ...
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မီးလောင်ကျွမ်းမှု ၂၁၆ ကြိမ်ဖြစ်ပွ...
ခေါင်းဖြတ်သတ်ခြင်းကိုဦးဆောင်သည့် IS ခါင်းဆောင်ခေါ...
ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရန် သတ်မှတ်ရက်ကျော်ကားများ တစ်ရက် ဒဏ...
YCDC ရွေးကောက်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ ပင်စင်ခံစားခွင့်မရှိဟ...
တိုင်းရင်းသားများ တောင်းဆိုချက် လိုက်လျောနိုင်၍ ပြ...
ဂိုဒေါင်ဆောက်မည်ဟု တင်ပြထားသူများ ခြောက်လအတွင်း အြ...
အပူလှိုင်းကြောင့် ဩစတြေးလျမီးသတ်သမားများ တောမီးငြှ...
မန္တလေးမြို့တွင် ဆေးယဉ်ပါး အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါများ...
မြောက်ကိုရီးယားက ဆိုက်ဘာစစ်တပ်အင်အားကို ၆၀၀ဝအထိတို...
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ...
တာဝန် ထမ်းဆောင် နေသည့် ရဲဝန်ထမ်းအား ဒဏ်ရာ ရရှိ စေသ...
အခြေခံ လစာ နည်းပါးမှုကြောင့် Yess သကြားလုံး စက်ရုံ ...
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အီလက်ထရွန်နစ်စက်ရုံတစ်ခုမှ မြန်မာ...
ဦးဥတ္တမ ကြေးသွန်းရုပ်ထု တောင်ကုတ်တွင်ထားရှိမည်
ဖားကန့်မြို့နယ် တောင်ပြိုကျေးရွာတွင် မြေပြိုကျမှုဖြ...
မလေးရှားတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အသတ်ခံရမှုများအတွ...
ဖမ်းဆီးထားသော ပြိုင်ကားများကို ပိုင်ရှင်များ ပြန်ေ...
တရုတ်က ယခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ဆန် တန်တစ်သန်း ၀ယ်ရန်သဘေ...
ကျေးဇူးတင်ပါသည် သမ္မတကြီး ခင်ဗျား………….
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံမတည်ငြိမ်အောင် လုပ်သူများ...
မက်ဒေါနယ် အစားအစာ မသန့်သည့်အရာများပါဝင်မှု ဂျပန်ဆို...
လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ဆွေးနွေးရန် သုံးပွင့်ဆိုင် ညွ...
ဂျပန်နိုင်ငံက ကွန်ဒုံးစွတ် အစားအစာ
တစ်ကျော့ပြန် ဖုန်ကြားရှင် နောက်မှာ ဘယ်သူရှိမလဲ ?
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခံဒေသခံများ စား...
ပြင်သစ်ဂျာနယ်ရုံး တိုက်ခိုက်ခဲ့သူတွေကို ဖော်ထုတ်နိ...
ဒေသအချို့တွင် လက်လုပ်မြေမြှုပ်မိုင်းကို ငါးကန်နှင်...
အရပ်ဘက်လူငယ်အဖွဲ့များ UPWC နှင့် တွေ့ရန် အကြိုဆွေး...
NCCT၏ အစည်းအဝေး ဇန်န၀ါရီဒုတိယပတ်တွင် ကျင်းပမည်
ကချင်ပြည်နယ် သစ်ခိုးဂိုဏ်းဖမ်းဆီးမှု ငါးနှစ်အတွင်း ...
အမေရိကန်သို့ သစ်တင်ပို့ခွင့်ပြန်ရ၍ တစ်နှစ်အတွင်း တ...
ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီ အင်းစိန်ထောင်မှ နိုင...
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ မုံရွ...
တောင်ငူတည်းခိုခန်း ဗုံးခွဲတရားခံ စောထွန်းထွန်းကို ...